Google dia efa nanome daty hamaranana ny fampifanarahana ny kinova 2 amin'ny Chrome Manifest | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 24/09/2021 19:53 | About us
Google dia namoaka fandaharam-potoana ao no anaovany antsipiriany ny fomba Hifarana ny fanohanana ny kinova 2 avy amin'ny fisehony Chrome manohana ny kinova 3, izay nirehitra noho ny fanakorontanana ny plugins fiarovana azy sy ny fanakanana ny atiny tsy mendrika.
Ho fanampin'ny fampidirana ny kinova faharoa amin'ny fisehoana, ny blocker doka uBlock Origin malaza dia mifandray, izay tsy azo afindra amin'ny kinova fahatelo amin'ny fisehoana noho ny faran'ny fanohanana ny maody fanakanana ny webRequest API.
Tamin'ny 17 Janoary 2022, ny plugins mampiasa ny kinova faharoa amin'ny fisehoan-javatra dia tsy ekena intsony ao amin'ny Chrome Web Store, fa ireo mpandrindra plugin efa nampiana teo aloha dia mbola afaka mandefa vaovao farany ihany.
Amin'ny volana Janoary 2023, hijanona tsy mifanaraka amin'ny kinova faharoa i Chrome ny fisehoana ary ny plugins rehetra mifandray aminy dia hijanona tsy hiasa. Mandritra izany fotoana izany dia voarara ny fandefasana fanavaozana ny fanampim-panazavana toy izany ao amin'ny Chrome Web Store.
Tany am-piandohan'ity taona ity, ho an'ny Chrome 88, dia nanambara izahay fa misy ny kinova vaovao miseho ho an'ny ekosistema fanitarana Chrome. Taona maro nanamboarana azy, Manifest V3 dia azo antoka kokoa, mahomby ary mitahiry fiainana manokana noho ny teo alohany. Izy io dia fivoaran'ny sehatra fanitarana izay manisy fiheverana ny tontolon'ny tranonkala miova sy ny hoavin'ny fanitarana browser.
Rehefa mijery ny ho avy isika ary manohy mamerina sy manatsara ny fiasan'ny Manifest V3, dia te-hizara antsipiriany momba ny drafitra hanafoanana ireo fanitarana avy amin'ny Manifest V2 ihany koa izahay.
Tokony hotadidintsika izany ny andiany fahatelo amin'ny fisehoana, izay mamaritra ny fahaiza-manao sy ny enti-manana omena ny plugins, ao anatin'ny fandraisana andraikitra hanamafisana ny filaminana sy ny fiainana manokana, fa tsy ny webRequest API, ny déclarativeNetRequest API, izay voafetra ny fahaizany, aroso.
While the WebRequest API dia mamela anao hampifandray ireo mpanera anao izay manana fidirana feno amin'ny fangatahana tambajotra ary afaka manova ny fifamoivoizana amin'ny sidina, ny déclarativeNetRequest API dia manome ny fidirana amin'ny motera sivana ihany tao anatin'ilay boaty natsofoka tao anaty fitetezana izay mitantana irery ny lalànan'ny fanakanana. , izay tsy mamela anao hampiasa ny algorithmanao sivana manokana ary tsy mamela anao hametraka fitsipika sarotra mifampitohy mifototra amin'ny fepetra.
Rehefa manakaiky ireo daty ireo dia hizara antsipiriany bebe kokoa momba ny kinova Chrome kendrena ho an'ny fanovana izahay, ary koa ny fampahalalana bebe kokoa momba ny mety ho fiantraikan'ny mpamorona fanitarana sy ny mpampiasa.
Mandritra izany fotoana izany, hanohy hanampy fahaiza-manao vaovao amin'ny Manifest V3 izahay mifototra amin'ny filàna sy ny feon'ny vondrom-piarahamoninay mpamorona. Na dia tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa aza, dia nisy fanitarana mahaliana maromaro teo amin'ny sehatra fanitarana.
Araka ny Google, dia miasa hatrany amin'ny fampiharana ny fahafaha-manao fanambarana NetRequest takiana amin'ny plugins izay mampiasa webRequest, ary mikasa ny hitondra ny API vaovao ao anaty endrika iray izay mahafeno tanteraka ny filan'ireo mpamorona plugin efa misy.
Amin'ny volana ho avy, dia hamoaka ny fanohanana ireo script amin'ny atiny azo ovaina ihany koa izahay ary safidy fitahirizana fitadidiana, ankoatra ireo fahaiza-manao vaovao. Ireo fanovana ireo dia noforonina tao anaty eritreritra ny valin'ny vondrom-piarahamonina ary hanohy hanangana fampiasa API Extension matanjaka kokoa izahay satria fampahalalana bebe kokoa no zarain'ny mpamorona.
Ohatra, i Google dia efa nanisy fiheverana ny hetahetan'ny vondrom-piarahamonina ary nanampy fanampiana ho an'ny déclarativeNetRequest API ho an'ny fepetra fitsipi-pitsipika marobe, fanivanana regex, fanovana lohateny HTTP, fanovana sy fanampiana fitsipika mavitrika, fanesorana sy fanoloana ireo masontsivana. Fangatahana, sivana takelaka , ary famoronana fitsipika voafaritra manokana ho an'ny fivoriana.
Amin'ny volana ho avy dia kasaina hapetraka bebe kokoa ny fanohanana ireo sora-tanana azo havaozina ho an'ny fikirakirana atiny sy ny fahaizana mitahiry angona ao amin'ny RAM.
Finalmente raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao momba ny naoty, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Google dia efa nanome daty hamaranana ny fampifanarahana ny kinova 2 an'ny Chrome Manifest